mitombo ovy - magazine "Potato System"
Tena Label potato growing
Label: potato growing
Ny lehiben'ny Repoblika Chuvash dia niantso ny hampitombo ny famokarana vokatra ara-tontolo iainana
Ny toeram-pambolena ao Chuvashia dia tokony hampiasa ny fotoana rehetra hampitomboana ny famokarana vokatra ara-tontolo iainana, hamorona "marika maitso" ary hanohanana ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknolojia amin'ny ...
Sergey Averin, agronomista ao amin'ny Dmitrovsky Potato LLC Ny toeram-pambolenay, LLC Dmitrovsky Potato, dia hita ao amin'ny Distrikan'i Nekrasovsky ao amin'ny Faritra Yaroslavl. Mpitantana...
Dagestan dia mahazo ovy betsaka
Ao amin'ny Repoblikan'i Dagestan, ezahina ny hampitomboana ny famokarana vokatra avy amin'ilay antsoina hoe "borscht set". Ovy, laisoa, karaoty, tongolo ...
Olana ara-pambolena ao Azerbaijan: fijinjana manan-karena sy tsy ilaina
Ny fijinjana tamin'ity taona ity tany Azerbaijan dia nivadika nanankarena, saingy niatrika olana ny tantsaha - tsy misy ny fangatahana. Voatabia taonina ao Shamkir ...
Fambolena ovy any Kyrgyzstan. Experience momba ny KH "Kirby"
Roman Viklenko, lehiben'ny agronomista ao amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana Kirby, Repoblikan'i Kyrzizstan Sahabo ho 20 tapitrisa hektara ny faritanin'i Kyrgyzstan, izay 10,6 tapitrisa hektara ...
Ny ovy maniry any Kyrgyzstan. Ny làlana no hitantana ny làlana
Ity lahatsoratra ity dia tohin'ny andiana fitaovana natokana ho an'ny fambolena ovy any amin'ireo firenena CIS. Tamin'ny laharana teo aloha dia niresaka ny anjara asan'ity ...
Sakafo mineraly ho an'ny ovy. Torohevitra PhosAgro
Ny ovy dia mamokatra be, nefa miaraka amin'izay, vokatra miasa mafy sy lafo. Ny agronomista manana traikefa rehetra hahatratrarana vokatra avo lenta ...
Formula amin'ny fanjarian-tsakafo isaky ny dingana
Ny fihinanana otrikaina ananan'ny zavamaniry mandritra ny vanim-potoana maniry dia tsy mitovy. Rehefa mandeha ny dingana fenolojika dia miova ny filàna elanelam-potoana sasany ...
Mitombo ny fiheverana ny famokarana ovy any Ozbekistan
Ny ovy dia iray amin'ireo zava-maniry lehibe stratejika ho an'i Ozbekistan. Mandritra izany fotoana izany dia mendrika ny fijerena ny fijerin'ny fampandrosoana ...
Topimaso amin'ny toe-javatra eo amin'ny sehatry ny indostria. Tsy misy firaketana firaketana an-tsoratra, fa miaraka amin'ny fanantenana ny fitomboana
Alexey Krasilnikov, Tale Mpanatanteraky ny fambolena ovy Union ovy amin'ny vanim-potoana vaovao dia nanomboka tara ary tamin'ny fotoana nanoratana (24 ...
P. 1 amin'ny 7 1 2 ... 7 Manaraka
"Ah, ovy, matsiro!" Ny mponin'i Chelyabinsk dia nisafidy karazana ovy tsara indrindra
Fijinjana, vidiny ary drafitra ho avy